Aftida dastuurka Puntland oo ansixintiisa la bilaabi doona 15-ka April. – Radio Daljir
Aftida dastuurka Puntland oo ansixintiisa la bilaabi doona 15-ka April.
Garowe, Mar 10 – Wareegto ka soo baxday madaxtooyada Puntland ayaa lagu iclaamiyey in aftida dastuurka qabyada ah ee Puntland la qaban doono 15-ka bisha April, 2012.
Guddiga doorashada Puntland ayaa guddoomiyey in aftida dastuurka la bilaabo 15-ka bisha, talo ahaanna ugu soo jeediyey xukuumada iyo baarlamaanka Puntland.
Guddoomiyaha guddiga doorashada Maxamed Xasan Barre ‘Shimbiralaaye’ oo ka hadlay xaflad lagu iclaamiyey gooraynta aftida dastuurka ayaa sheegay in ay guddoomiyeen in 480 ergay ay afti u qaadi doonaan dastuurka Puntland, ayna ergooyinku iman doonaan caasimada Puntland ee Garowe 15-ka bisha April, ayna bilaabi doonaan ansixinta dasturka.
Waxaa uu intaas ku daray in guddigu ay go’aankooda u gudbiyeen xukuumada iyo baarlamaanka.
Afhayeenka baarlamaanka Puntland C/rashiid M. Xirsi oo isna ka hadlay xaflada ayaa sheegay in himiladii aasaaska Puntland uu ahaa in doorasho ijtimaaci ah la qabto, shacabkuna uu ka qayb qaato hoggaanka dalka; waxaa uu xusay in ay tahay horumar in la hirgaliyo barnaamijka dimuqraadiyadeed ee Puntland, juhdi badanna loo soo maray in la soo gaaro heerka maanta la joogo.
Md. Xirsi waxaa uu sheegay in Puntland ay gaartay horumar siyaasadeed, dhaqaale, iyo bulsheed, taasna ay ka turjumayso tadawurka la soo maray iyo heerka mustaqbalka ka hiigsanayo.
Waxaa intaas kadib la akhriyey wareegto uu saxiisay M/weyne Faroole oo uu ku aqbalay gooraynta aftida dastuurka Puntland.
M/weynaha Faroole oo gunaanadka xaflada iclaaminta gooraynta aftida dastuurka ka hadlay ayaa sheegay in uu hore u ballan qaaday in uu hirgelin doono barnaamijka dimuqraadiyadeed ee Puntland, uuna doonayo in uu ka dhabeeyo doorashooyin ka hirgala Puntland.
Waxaa uu ka soo sheekeeyey wejiyadii kala duwanaa ee uu soo maray dastuurka Puntland, iyo in hadda la gaaray xilligii doorashooyin laga hirgalin lahaa degmooyinka, gobollada iyo hoggaanka sare ee Puntland.
M/weyne Faroole waxaa uu sheegay in mudada golayaasha dawladu ay tahay shan (5) sano, aanayna u baahnayn in muran la galiyo; waxaa uu xusay in dastuurka ay ka dhaxleen xukuumadii ka horeysay uu sidaa dhigayey, waxna aan laga badalin; taa macnaheeduna uu yahay in doorashooyinka la qaban doono 8-da bisha Janaayo, 2014.
Qodobkan ayaa dhalin doona is-maandhaad siyaasadeed, maadaama in badan siyaasiyiinta u hanqal taagaysa hoggaanka sare ee Puntland ay qabaan in mudada golayaasha dawladu ay tahay afar (4) sano, doorashooyinka guudna ay tahay in la qabto 8-da bisha Janaayo, 2013.
Marka la ansixiyo dastuurka Puntland waxaa xigi doona dhismaha iyo sharciyaynta axsaabta siyaasadeed oo la sheegay in lagu koobi doono 3-da xisbi ee ugu codka bata doorashooyinka golayaasha deegaanka. Saddexdaas xisbi ayaa deetana u tartami doona kuraasta baarlamaanka. Baarlamaanka ayaa isna dooran doona afhayeenka baarlamaanka, madaxweynaha, iyo ku xigeenkiisa.